मिर्गौला पिडित बि.क. लाई जापानबाट आर्थिक सहयोग – Arthik Awaj
मिर्गौला पिडित बि.क. लाई जापानबाट आर्थिक सहयोग
By आर्थिक आवाज २०७५ भाद्र १३ गते बुधबार ०८:२९ मा प्रकाशित
जापान, १३ भदौ । दुबै मिर्गौला फेल भएर उपचाररत पोखरा लेखनाथ नगरपालिका वडा.नंम्बर १९ का २८ वर्षिय दिपेन्द्र वि.क को उपचारका लागी जापानको टोकियोमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।
जापानमा रहेका पुरून्चौर १९ निवासी राजु पौडेल र सरला लम्सालको पहलमा रकम संकलन गरि बि. क लाई पठाईएको छ । जापानको टोकियोमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूबाट संकलन भएको ६४ हजार ६ सय ४४ रूपैँया रकम पिडीत परिवारलाई क्यु एस रेमिट मार्फत बुधवार हस्तान्तरण गरिएको छ ।
आफ्नै गाउं ठाऊँमा बस्ने भाईलाई यस्तो भयानक रोग लागेको समाचार बाहिर आएपछि आफ्नो पहलमा सानो सहयोगले उनको जिवन रक्षाका लागी केही योगदान पुग्न सक्छ भन्ने सोचले आर्थिक रकम संकलन गरेको पौडेलले बताए । टोकियोमा बसोबास गर्ने २७ जना नेपालीहरुले आर्थिक सहयोग गरेको पौडेलले जानकारी दिए ।
दुबै मिर्गौलाले काम नगरेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण डायोलोसिस गराउने पैसा समेत नभएको अवस्थामा आफुलाई यसरी सहयोग प्राप्त भएकोमा बिरामी बि.क ले खुसी व्यक्त् गरेकाछन् । यसैगरी उनले सहयोग गरिदिन सम्पुर्णलाई आग्रह गर्दै हालसम्म सहयोग गर्नुहुने सवैलार्ई धन्यवाद दिएका छन् ।
उनको सहयोगका लागी नेपालमा पनि विभिन्न स्थानमा सहयोग रकम संकलन भईरहेको छ । नेपालमा सहयोग गर्न चाहनेले दिपेन्द्र ऊपचार सहयोगार्थ जनसेवा बचत सहकारीमा खोलिएको खाता नंम्बर १०४०३० ३०० – २०२४८ मा जम्मा गर्न सकिनेछ । साथै सिधै उनलार्ई सहयोग गर्न चाहनेले सम्पर्क नंम्बर ९८१७७५२४५५ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।